WWE नेटवर्क जनवरी 2021 बाट भारत मा SonyLIV को माध्यम बाट विशेष रूप बाट उपलब्ध हुनेछ - Wwe
WWE नेटवर्क जनवरी 2021 बाट भारत मा SonyLIV को माध्यम बाट विशेष रूप बाट उपलब्ध हुनेछ
WWE सञ्जाल विशेष रूप मा SonyLIV को माध्यम बाट भारत मा जनवरी २०२१ बाट उपलब्ध हुनेछ। WWE नेटवर्क उपलब्ध हुने खबर छ, जबकि SonyLIV पहिलो पटक घोषणा गरिएको थियो जब WWE मार्च २०२० मा सोनी संग आफ्नो नयाँ सम्झौता मा हस्ताक्षर गरीयो।
हामी बाहिर पुग्यौं kaskWWENetwork एक सदस्यता नवीकरण समस्याहरु पछि। तिनीहरूले हामीलाई निम्न प्रतिक्रिया पठाए:
हामी तपाइँलाई सूचित गर्न चाहन्छौं कि जनवरी २०२१ बाट, भारत मा WWE नेटवर्क विशेष रूप मा SonyLIV को माध्यम बाट उपलब्ध हुनेछ। नतिजाको रूपमा, तपाइँको वर्तमान WWE नेटवर्क सदस्यता नवीकरण हुनेछैन। तपाइँ अझै पनी सोनी टेन १ र सोनी टेन ३ च्यानलहरुमा तपाइँको मनपर्ने WWE कार्य लाई समात्न सक्नुहुन्छ। जब यो प्रोग्रामिंग तपाइँको स्थानीय क्षेत्र मा निर्धारित छ को बारे मा अधिक जानकारी को लागी स्थानीय लिस्टिंग जाँच गर्नुहोस्।
तपाइँ तल प्रतिक्रिया को स्क्रीनशट जाँच गर्न सक्नुहुन्छ:
भारत WWE को लागी एक महत्वपूर्ण बजार हो
WWE नेटवर्क पहिलो पटक २०१५ को अन्त मा भारत मा शुरू भयो। समय मा, जर्ज Barrios - WWE के सह -अध्यक्ष - भारत एक 'रणनीतिक महत्वपूर्ण WWE को लागी बजार' भन्यो र यो निश्चित रूप देखि तब देखि साबित भएको छ। यहाँ के छ Barrios भन्नुभयो जब WWE नेटवर्क भारत मा शुरू भयो:
'भारत WWE को लागी एक रणनीतिक महत्वपूर्ण बजार हो, र हामी त्यहाँ हाम्रा प्रशंसकहरु को लागी WWE नेटवर्क उपलब्ध गराउन रोमाञ्चित छौं। WWE नेटवर्क को वैश्विक विस्तार WWE ब्रान्ड को अन्तर्राष्ट्रिय स्तर मा बृद्धि गर्न को लागी हाम्रो प्रतिबद्धता मा एक प्रमुख चालक हो।
WWE मार्च २०२० मा सोनी पिक्चर्स नेटवर्क भारत संग आफ्नो नयाँ सम्झौता मा हस्ताक्षर गरे।
6 अन्तरमहाद्वीपीय च्याम्पियनशिप २०१ 2018 र उनीहरुको रेटिंग को शासन
WWE उत्तरजीवी श्रृंखला 2018: म्याच कार्ड र यसको परिणाम को भविष्यवाणी
WWE सुपरस्टार मा ब्याकस्टेज समाचार केली केली संग पेशेवर हुन भनिएको छ [अनन्य]
WWE समाचार: ईवा मेरी कपाल को रंग परिवर्तन, औंलाहरु मा राष्ट्र राख्छ
F झगडा तपाईं सजीलै जित्न सक्नुहुन्न, त्यसैले प्रयास गर्नुहुन्न आफ्नो समय खेर फालनुहोस्
WWE SmackDown यस हप्ता सही5कुराहरु पाउनुभयो: Shinsuke Nakamura च्याम्पियनशिप जित्यो; बिग ई आफ्नो MITB ब्रीफकेस गुमाउँछ
ब्रेट हार्ट: द हिटमैन को5अविस्मरणीय WWE मिलान
जोसेफिन बेकरका कति बच्चाहरु थिए? नागरिक अधिकार कार्यकर्ता फ्रान्सको पान्थियोनमा अन्त्येष्टि प्राप्त गर्ने पहिलो अश्वेत महिला बन्ने छन्
पूर्व WWE सुपरस्टार जेक साँप रोबर्ट्स AEW डेब्यू को प्रशंसा
3 WWE सुपरस्टार जो हालै निलम्बित थिए र2जो शायद छैनन्
WWE समाचार: युवा बक्स नयाँ टी शर्ट जारी गरेर WWE मा एक शट लिन्छन्
सम्बन्ध विशेष हुनु भन्दा कति वटा मितिहरू छन्?
साथी नहुनु सामान्य हो
म किन केहि गर्न सक्दिन?
कसरी एक सम्बन्ध मा एक महिला को सम्मान गर्न को लागी
उसले मेरो आँखामा किन हेर्छ?
घमण्ड गर्ने साथीहरु संग कसरी व्यवहार गर्ने
कसरी बताउन को लागी यदि एक कान्छी केटी तपाइँलाई मनपर्छ